Aldrich Hazen Ames: Basaaskii CIA-du Maraykanku Eeday - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Aldrich Hazen Ames: Basaaskii CIA-du Maraykanku Eeday
Xogside – Aldrich Hazen Ames wuxu ku dhashay magaalada River Falls ee dalka Maraykanka Bishii May 26, sandkii 1941. Aabihii wuxu ah macalin jaamcadda University Of River Falls wax ka dhiga, hooyadiina waxay ahayd macalimad luqadda Englishta ka dhigta dugsiyada sare.
Ames wuxu ahaa kan ugu weyn saddexda caruur ee ay dhaleen, dhinaca kalena wuxu ahaa wiilkooda keliya madaama labada kale hablo ahaayen. Sanadkii 1952 aabihii wuxu shaqo ka bilaabay CIA, taasi oo ahayd agaasinka hawlaha gobolka Virginia.
Sanadkii 1953 ayaa aabihii loo bedelay Southeast Asia ( koonfur bari Aasiya) waxaana raacay qoyskiisa, halkaasi waxa loogu diray inuu soo qiimeeyoo hawlaha aan sida fiican loo qaban ee xafiiska CIA (Carleton).
Basaaska Ames oo ah wiilkiisa wakhtigaasi wuxu dhigan jiray dugsiga sare Mclean High Scool Virginia, isagoo bilaabay sanadkii 1957. Laakiin sanadkii labaad ee dugsiga wuxu shaqo hoose ka bilaabay CIA iyadoo halkaasi uu ku tegay taageero uu helay waxayna ahayd inuu diiwan geliyo dhacdooyinka la habeeyay iyo inuu calaamadiyo faylasha laga sheqeeyay ee la kala saaray.
Ames sanadkii 1959 wuxu galay jaamcadda University of Chicago waxaana u qorshaysnaa inuu barto cilmiga Dhaqamada shisheeyaha iyo taariikhda laakiin hamigiisa mudada dheer uu ku riyoonayay wuxu ku dhamaaday fashil mana u dhamaysan sanadki labaad jaamacadda.
Ames xagaagii sanadkii 1960 ayaa laga shaqaaleeyay CIA iyadoo aanu markaasi ahayn caawiye, waxaana uu ku shaqaynayay dhinac farshaxanka sawirka, laakiin bishii Feberweri sanadkii 1962 ayuu noqday kaaliyaha tiyaatarka Chicago.
Markii uu ku soo noqday Washington Ames, xafiiska CIA waxay siiyeen shaqo rasmi ah oo buuxda taasi oo ahayd shaqadii diiwaan gelinta ee uu qaban jiray markii uu dugsiga sare dhiganayay oo wakhtigaasi uu ahaa caawiye qoraalo badan aan lagu aamini jirin.
Wakhtigaasi Aldrich Ames dib uga bilaabay Jaamacadda Washington University barashada cilmiga taariikhada waxaana uu dhameeyay shan sano ka dib markii uu Washington yimi. Ames weligii kuma fekrin inuu noqdo basaas iyo inuu shaqo ka qabto CIA.
Aldrich Ames Jaamacadda Washington University ayuu ka sii watay barashada taarikhda waxaana uu dhameeyay shan ka dib markii uu Washington yimi. Ames weligii kuma fekrin inuu noqdo CIA iyo shaqada basaasidaa
Ames oo ah wiilkiisa wakhtigaasi wuxu dhigan jiray dugsiga sare Mclean High Scool Virinia, isagoo bilaabay sanadkii 1957. Laakiin ka dib sanadkiis labaad ee dugsiga isagoo taageero helay wuxu shaqo hoose ka bilaabay CIA waxayna ahayd inuu diiwan geliyo dhacdooyinka la habeeyay iyo inuu calaamadiyo faylasha laga sheqeeyay ee la kala saaray.
Ames sanadkii 1959 wuxu galay jaamcadda University of Chicago waxaana u qorshaysnaa inuu barto maadad Dhaqamada shisheeyaha iyo taariikhda laakiin hamigiisa mudada dheer uu ku riyoonaya wuxu ku dhamaaday fashil mana u dhamaysan sanadki labaad jaamacadda.
Ames xagaagii sanadkii 1960 ayaa laga shaqaaleeyay CIA waxaan uu ka bilaabay inuu noqdo Sawirle CIA ah, laakiin bishii febeweri sanadkii 1962 ayuu noqday kaaliyaha tiyaatarka Chicago
Markii uu ku soo noqday Washington Ames CIA waxay siisay shaqo rasmi ah oo buuxda taasi oo ahayd shaqadii diiwaan gelinta ee uu qaban jiray markii uu dugsiga sare dhiganayay.
Aldrich Hazen Ames wuxu ku dhashay Bishii May 26, sandkii 1941 magaalada River Falls oo dalka Maraykanka ah.Aabihii wuxu macalin ka ahaa jaamcadda University Of River Falls, hooyadiina waxay ahayd macalimad luqadda Englishta ka dhigta dugsiyada sare.
Ames wuxu ahaa kan ugu weyn saddexda caruur ee ay dhaleen, dhinaca kalena wuxu ahaa wiilka keliya ee ay dhaleen madaama labada kael hablo ahaayen. Sanadkii 1952 aabihii wuxu shaqo ka bilaabay CIA, taasi oo ahayd agaasinka hawlaha gobolka Virginia.
Sanadkii 1953 ayaa bedelay Southeast Asia ( koonfur bari Aasiya) waxaana raacay qoyskiisa, waxaana uu loo diray inuu soo qiimeeyoo hawlaha aan sida fiican loo qaban (Carleton).
Previous articleMaamulka Gobolka Gebiley oo dhagax dhigay afar garoon oo kubadda cagta ah
Next articleDhacdooyinkii Yaabka Lahaa Dagaalkii Labaad